I- idijithali yemali idatha yesikhathi sangempela.
Zonke izimakethe ze-crypto emhlabeni wonke ezinezinga lokushintshanisa lanamuhla kanye nevolumu yokuhweba.
Abucoins imakethe ye-crypto
BHEX imakethe ye-crypto
BITBOX imakethe ye-crypto
BITKER imakethe ye-crypto
BTSE imakethe ye-crypto
BW imakethe ye-crypto
BaseFEX imakethe ye-crypto
Binance.KR imakethe ye-crypto
BitFlip imakethe ye-crypto
BitMEX imakethe ye-crypto
BiteBTC imakethe ye-crypto
Bitpanda Global Exchange imakethe ye-crypto
Bitsane imakethe ye-crypto
BtcTrade.im imakethe ye-crypto
Buda imakethe ye-crypto
Bybit imakethe ye-crypto
Bytex imakethe ye-crypto
CEX imakethe ye-crypto
CODEX Exchange imakethe ye-crypto
Chaince imakethe ye-crypto
CoinEx Market imakethe ye-crypto
Coinhouse imakethe ye-crypto
Coinrail imakethe ye-crypto
CredoEx imakethe ye-crypto
Cryptohub imakethe ye-crypto
cfinex imakethe ye-crypto
DOBI trade imakethe ye-crypto
Deribit imakethe ye-crypto
EN imakethe ye-crypto
EtherDelta imakethe ye-crypto
ExtStock imakethe ye-crypto
FCoin imakethe ye-crypto
fex imakethe ye-crypto
GBX Digital Asset Exchange imakethe ye-crypto
Huobi imakethe ye-crypto
Huobi (HBUS) imakethe ye-crypto
Instant Bitex imakethe ye-crypto
Koineks imakethe ye-crypto
MBAex imakethe ye-crypto
OKCoin imakethe ye-crypto
Octaex imakethe ye-crypto
OpenLedger DEX imakethe ye-crypto
Phemex imakethe ye-crypto
QBTC imakethe ye-crypto
Qryptos imakethe ye-crypto
Quoine imakethe ye-crypto
STEX imakethe ye-crypto
Stellarport imakethe ye-crypto
TAGZ Exchange imakethe ye-crypto
TDAX imakethe ye-crypto
TRX Market imakethe ye-crypto
Tokocrypto imakethe ye-crypto
Trade Satoshi imakethe ye-crypto
WEX imakethe ye-crypto
Waves Decentralized Exchange imakethe ye-crypto
xBTCe imakethe ye-crypto
55 Global Markets imakethe ye-crypto
Izimakethe ze-Cryptocurren ziyashintshana ngokuhweba ngezimali zedijithali noma ama-izimali zeDividenti. Izimakethe ze-Crypto zivame ukubhekisisa ama-idijithali yemali, yize futhi zingathengisa kwezimali ezinkulu.
Ukushintshaniswa kwe-Idijithali yemali kudayiswa ngababili: I-crypto kuya kwe-crypto noma i-crypto kuya kuhlobo lwemali oluvamile. Ukunquma inani lokuthenga / ukuthengiswa ngakunye kokuhweba ngakunye, inani lokuthengiselana lihunyushwa ngamadola.
Ukushintshaniswa kwe-Crypto kunezimpawu eziyinhloko:
Inani le-izimali zeDividenti
Inani lamabili wokuhweba
Ivolumu yokuhweba yokushintshana kwe-Idijithali yemali - inani eliphelele ngamadola akho konke ukuthengiselana kwamabili ngamabili okuhweba isikhathi esithile. Njengomthetho, umthamo wokuhweba wokushintshaniswa kwe-crypto ulinganiselwa ngosuku.
Inani lama-izimali zeDividenti ezimakethe zokushintshana kwe-idijithali yemali inani eliphelele lama-cryptocurrensets ahlukene athengiswe kulokhu kuhlangana ezikhathini zamuva. Inani lamandla we-cryptocurrensets yokushintshaniswa kwe-idijithali yemali libonisa ukwahluka kwayo kokuhweba ngokuthe ngqo ne-idijithali yemali yakho, inani labangathengi nabathengisi kulokhu kushintshiselana kwe-crypto.
Inani lezezimali - izinhlobo eziphelele zezimali zakudala ezithengiswa noma zithengiwe i-crypto ngayinye kule makethe ye-cryptocur lwemali. Njengomthetho, ama-izimali zeDividenti athengiswa ngamadola.
Inani lamazinga okuhweba we-crypto-exchange isamba sokukhokhelwa okuqediwe kule makethe ye-crypto ngosuku. Lapho likhulu inani lababili bokuhweba, ukuhweba ngenkuthalo kuyenzeka, abathengi abengeziwe, abathengisi be-crypto kulokhu kushintshaniswa.
Ku-Cryptoratesxe.com, sibheka konke ukushintshanisa okusebenzayo kwe-crypto emhlabeni futhi sibonisa isilinganiso sabo salezi zimpawu.
Siphinde futhi sinikeze imininingwane enemininingwane emakethe ngayinye ye-crypto mahhala futhi online.
Ukuhweba nge-Idijithali yemali kwethulwa kwe-idijithali yemali ngayinye:
I-Cryptocur lwemali yokuhweba inani.
Izinga eliphakeme kakhulu lokuthengwa kwe-cryptocur lwemali ekushintshaneni kwe-idijithali yemali.
Izilinganiso ezinhle kakhulu zokuthengiswa kwemali ye-idijithali yemali ekushintshisaneni kwe-idijithali yemali.
Isilinganiso se-Idijithali yemali
Isilinganiso sokushintshaniswa kwemali ye-crypto wethulwa kuwebhusayithi yethu mahhala online.
Isilinganiso sokushintshaniswa kwe-crypto singabhekwa ngokwezimpawu ezihlukile:
Ubuningi be-izimali zeDividenti
Ubuningi bezindawo zokuhweba
Sikubonisa itafula lokulinganisa le-crypto-exchange lilinganisa ngevolumu yokuhweba.
Sikholelwa ukuthi lapho likhulu inani lokuhweba, kukhuphuka isilinganiso semakethe ye-crypto.
Noma isilinganiso sokushintshaniswa kwe-crypto singabalwa zombili ngenani lababili bokuhweba kanye nenani lama-cryptocurrensets athengisiwe.
Ukushintshaniswa kwe-Idijithali yemali ku- 2021 - ithebula eliku-inthanethi ku-cryptoratesxe.com iwebhusayithi yokushintshanisa okuqhuba ukuhweba okusebenzayo kwe-cryptocur lwemali ku- 2021.
Ukushintshaniswa kwe-Crypto 2021 - insizakalo enolwazi olusha kusuka kukho konke ukushintshana okukhona emhlabeni.
Sivuselela njalo ulwazi ngokushintshaniswa kwe-idijithali yemali ye 2021, sinohlu nezilinganiso zokushintshaniswa kwe-idijithali yemali ye 2020, futhi sethemba ukuthi sizoba nesilinganiso sokushintshaniswa kwe-idijithali yemali ye 2022.
Landelela ukushintshaniswa okusebenzayo kwe-crypto ku 2021 kuwebhusayithi yethu.
Ukuhwebelana okungcono kakhulu kwe-idijithali yemali, izimakethe eziphezulu ze-idijithali yemali.
Ukuhwebelana okungcono kakhulu kwe-crypto emhlabeni, izimakethe eziphezulu ze-crypto - enkonzweni yethu online futhi mahhala.
Itafula lokuhwebelana okungcono kakhulu kwe-crypto yethulwa kuleli khasi, elihlelwe ngevolumu yokuhweba.
I-TOP 20 izimakethe ezinhle kakhulu ze-cryptocur lwemali ngokuya ngevolumu yokuhweba kubhekwa nathi ku-inthanethi, nsuku zonke kanye nangokwewashi.
Ukushintshaniswa okungcono kakhulu kwe-crypto kwanamuhla , izimakethe ezi-5 eziphezulu:
TAGZ-Exchange imakethe ye-crypto
Binance-KR imakethe ye-crypto
55-Global-Markets imakethe ye-crypto
DOBI-Trade imakethe ye-crypto
Amaphesenti aphezulu wokushintshaniswa kwe-idijithali yemali okungcono futhi kungahlanganiswa ngenani lama-izimali zeDividenti kanye nenani lababili bokuhweba ekushintshanisweni ngakunye.